၂၀၁၁ခုနှစ်အတွင်းက ထူးခြားတဲ့ ရိုက်ချက်ဓာတ်ပုံများ အပိုင်း (၁) – The Big Picture | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ၂၀၁၁ခုနှစ်အတွင်းက ထူးခြားတဲ့ ရိုက်ချက်ဓာတ်ပုံများ အပိုင်း (၁) – The Big Picture
၂၀၁၁ခုနှစ်အတွင်းက ထူးခြားတဲ့ ရိုက်ချက်ဓာတ်ပုံများ အပိုင်း (၁) – The Big Picture
Posted by Kyaemon on Dec 30, 2011 in Cultures, Education, Environment, Events/Fundraise, History, News, Photography, Style & Beauty, Travel, World News | 10 comments
2011 events Big Picture
အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံများ ကို ရွေးရတာ မလွယ်ပါ၊
ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်း ဖြစ်ရပ်တွေ အလိုက်ရွေးချယ်ရတာ၊
နှစ်ဆန်းပဌမ ၄ လ က  ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့
Greece ဂါရိနိုင်ငံ၊Spain စပိန် နိုင်ငံ နဲ့အနောက်နိုင်ငံ တို့ဆီ ပြန့်နှံ့ သွားတဲ့ဆန်ဒပြတာတွေ
လန်ဒန်က မင်ဂလာဆောင် အခမ်းအနား
တောင်ဆူဒန် နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်လာခြင်း
စတဲ့သတင်းကြီးဖြစ်ရပ်တွေက ဓာတ်ပုံတွေ ကို
ပဌမ ပိုင်း အဖြစ်တင်လိုက်ရတာပါ
The Year in Pictures: Part I – The Big Picture – Boston.com
Any “best of” list must surely be subjective. This one is no different. Choosing the best photographs of the year is an enormously difficult task, with many terrific photographs slipping through the cracks.
But with major news events asaguide, and with single images I fell in love with throughout the year forcing their way into the edit, I look at my favorite pictures from the first four months of the year.
Two main stories dominated headlines in the first part of the year: the Japan earthquake and tsunami, and the rising of the Arab Spring. The protests in the Middle East would spread to Greece, Spain, and eventually inspire the Occupy movement in Western nations.
Other stories includedahistoric wave of tornados in the U.S.,aRoyal wedding in London, and the creation of the world’s newest nation in South Sudan. Images from the rest of the year will follow in posts later this week. — Lane Turner (36 photos total)
ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်တွေကတော့ ဟုတ်ပါပြီ ဆိုက်တွေကိုတော့ နည်းနည်း ပြန်ပြီး ပြင်ဆင်ပေးပါဦး။ ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။
မြင်ကွင်းကျယ် လို တမျိုး၊ နီးနီးကပ်ကပ် လို တဖုံ၊ ကြည့်ရှုခံစား နိုင်အောင်
မူလကတင်ပြသူများ ဓာတ်ပုံဆရာ ဆရာမ ဆောင်းပါးရှင်တွေက
ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကကြည့်လို့ မရရင် ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Computer Monitor (TV screen) အကြီးကနေကြည့်နိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုပါတယ်၊
ဒါမှမဟုတ် ဒီလိုလုပ်နိုင်၊ ပုံကို တချက် Click ကလစ် လုပ်ရင် အရွယ် က သေး သွားပါမယ်
ချေးများနေပြန်ပြီ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ပုံတွေကို အဆင်သင့်လဲကြည့်ရသေးတယ်
ပုံကြည့်ရတာနဲ့တင် တန်လိုက်တာ ကျေးဇူးပါရှင့်
အရမ်းထူးခြားတဲ့ပုံတွေပါပဲ။ ရထားနှစ်စင်းကူးနေတဲ့ပုံသဘောကျတယ်။ ကျွမ်းကျင်ရာလိမ်မာဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်မယ်။
ပုံတွေကတော့ ရှယ်ပဲနော်.. အကုန် အသက်ဝင်တယ်။
ပထမဆုံး ရေတွေ ၀င်လာတဲ့ ပုံကတော့ တော်တော် ထိတ်လန့်ဖို့ ကောင်းတယ်။ အများနဲ့ ဆိုင်လို့..
အောက်ဆုံးက ပုံက သနားဂရုဏာသက်စရာ မြင်ကွင်းလေးပါ ခင်ဗျာ
ကောင်းကင် အရောင်တောက်နေတဲ့ ပုံက photoshop နဲ့ပြင်ထားတာထင်တယ်။
ပုံ အမှတ်စဉ် ၃၁ က aurora borealis ကို northern lights လဲခေါ်တယ်၊
ဒီဟာကို Wikipedia ဝီကီပဒီးယာ မှာ ပုံများစွာနဲ့ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းထားပါတယ်၊